B1 Free Archiver: mpitantana ny arisiva mahafinaritra sy tsotra | Avy amin'ny Linux
B1 Free Archiver: mpitantana archive iray tsotra sy tsotra
Ao amin'ny lahatsoratray farany antsoina "PeaZip Free Archiver: mpitantana rakitra voafintina multiplatform" miresaka izahay hoy "Mpandrindra rakitra voafehy" izany miaraka amin'ny "7Zip" sy "B1 Free Archiver" no 3 malaza indrindra amin'ny sehatry ny multiplatform. Amin'ity lahatsoratra ity, anjaran'ny «B1 Free Archiver» ary izao dia mameno kely kokoa, izay rehetra hita tao amin'ny publication antsoina hoe «Ahoana ny fomba hitantanana ireo rakitra voageja ao amin'ny GNU / Linux?".
Ary toy ny tamin'ny lahatsoratra teo aloha, andao tadidio ireo tsy dia manam-pahalalana amin'izany Ny "Compressed File Manager" dia rindranasa na programa mamela sy manamora ny famatrarana / famoahana ny rakitra sy ny fampirimana amin'ny rafitra fiasa, izay mandrafitra mekanika na teknika tena tsara ampiasaina hampihenana ny olan'ny fotoana, habaka, fiarovana ary fiainana manokana amin'ny fitantanana ny angona voatahiry sy ampiasaina.
2.1 Maninona no mampiasa B1 Free Archiver?
2.2 Aiza no hametrahana B1 Free Archiver?
2.2.1 MS Windows
B1 Free Archiver dia mpitantana arisiva 100% maimaimpoana. Noho izany, azo ampiasaina amin'ny solosaina rehetra izy io nefa tsy mila misoratra anarana na aiza na aiza na mandoa vola amin'ny olona na fikambanana. Ary afaka izany mizara na zaraina amin'ny hafa, namana na mpiara-miasa.
ihany koa B1 Free Archiver dia miasa amin'ny sehatra fantatra rehetra, toy ny: Windows, Linux, MacOS ary Android. Fa inona no tsy mahomby? ilaina, rindrambaiko hafa isaky ny fitaovana samihafa, na solosaina, finday na takelaka. Inona no mahatonga azy ny vahaolana natambatra tsara indrindra ho an'ny karazana fitaovana rehetra. SManohana ireo endrika malaza indrindra, toy ny: b1, zip, jar, xpi, rar, 7z, arj, bz2, cab, deb, gzip, tgz, iso, lzh, lha, lzma, rpm, tar, xar, z, dmg sy ny hafa. SY miasa miaraka amin'ny fiarovana ny teny miafina amin'ny rakitra.
Farany, B1 Free Archiver dia mora ampiasaina, tsy mila boky na torolàlana lehibe na sarotra. Mila apetraka sy ampiasaina fotsiny izy io, noho ny interface tsotra sy intuitive. Izy io koa dia miasa haingana, na dia miaraka amina rakitra be sy fisie marobe aza. Ity fampiharana ity, raha ny fanazavan'ireo mpamolavola azy, dia noforonina manaraka ny fenitra fiarovana sy fiarovana manokana. Ny B1 Archiver dia tsy manangona karazana fampahalalana manokana mihitsy ary tsy mametraka rindrambaiko manimba.
Maninona no mampiasa B1 Free Archiver?
B1 Free archive dia novolavolaina ho rindrambaiko Maimaimpoana sy lozisialy Open Source izay manambatra ny vahaolana voaporofo tsara indrindra amin'ny hevitra vaovao tany am-boalohany, eo amin'ny sehatry ny mpitantana rakitra. Noho izany, maimaim-poana izy io ary azo ampiasaina amin'ny fampiasana manokana na ara-barotra. Ary ny kaodiny dia misokatra ho an'ny antoko liana rehetra, amin'ny alàlan'ny fampidinana ireo loharanon'ny fitaovana sy tranomboky rehetra amin'ny programa amin'ny alalany tranokala ofisialy.
Ny vondron'ireo mpamolavola fampiharana dia mavitrika tokoa ary mamorona fitaovana sy tranomboky tsy tapaka hiara-miasa amin'ireo rakitra an-toerana, fantatry ny fanitarana ".b1". Ary ity dia nahatanteraka fa ny B1 Free Archiver dia manana ambaratonga avo lenta amin'ny fivezivezena (tahan'ny hafainganana / famatrarana) amin'ny ambaratonga ankapobeny. Fa izy koa dia manana ny algorithm madiodio nohatsarainy miaraka amin'ny tahan'ny hafainganam-pandeha / famatrarana tsara kokoa. Fanampin'izany ny fampiasana ny teny miafina encryption, izay manampy amin'ny fiarovana ny angona amin'ny alàlan'ny algorithm enkripsi 256-bit AES, izay tena sarotra na saika tsy ho vita mihitsy ny mamaky na mamoaka rakitra am-boalohany tsy misy teny miafina.
Aiza no hametrahana B1 Free Archiver?
Amin'izao fotoana izao dia mandeha amin'ny kinova laharana 1.7.120 ho an'ny Operating Systems miorina amin'ny MS Windows sy ny laharana 1.5.86 ho an'ny Operating Systems miorina amin'ny Linux sy MacOS. Ho an'ny Android dia mandeha ny laharana kinova 1.0.0130. Ary manokana dia miaraka amina fanohanan'ny ofisialy ireto andiany manaraka ireto amin'ny Operating Systems voalaza etsy ambony:
XP (32 bit),
Vista (32 bit), Windows 7 (32/64 bit)
8 (32/64 kely)
10.8 Liona an-tendrombohitra
10.6 Leopardan'ny oram-panala
Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10
Fedora 18 na avo kokoa
4.0.3 na ambony
Saingy na eo aza ny tsy fananany fanohanana ofisialy ny kinova fanavaozana ny Operating Systems voalaza etsy ambony, amin'ny tranga tena manokana an'ny GNU / Linux, dia miasa tsy misy olana amin'ny kinova Ubuntu sy DEBIAN ambony tsy misy olana miharihary. Raha hametraka archive B1 Free dia mila mampidina ny fonosana .deb ankehitriny antsoina hoe b1freearchiver_current_stable_i386.deb sy b1freearchiver_current_stable_amd64.deb ho an'ny Ubuntu / DEBIAN na b1freearchiver_current_stable_raw_i386.tar.gz sy b1freearchiver_currentawdd_dent_dent_dent_data_BDF/download ary apetraho toy ny mahazatra isaky ny GNU / Linux Distro ampiasaina.
B1 Free Archiver dia miaraka amin'i PeaZip Free Archiver izay mpitantana mahomby amin'ny rakitra voadidy miaraka amin'ny tontolo misy sary sy multiplatform, maimaim-poana sy maimaim-poana. Miaraka amin'ny interface tsotra sy intuitive be dia be, mitovy amin'ny an'ny WinRAR malaza an'ny Windows, miaraka amina safidy maro hamoronana rakitra voafintina na hamoahana ny hafa, amin'ny endrika maro, toy ny ZIP, RAR na 7Z fanta-daza ary ny endrika famatrarana azy manokana antsoina hoe B1 .
Izy io koa dia manana varavarankely mahazatra hijerena ny rafi-drakitra momba ny Rafitra miasa napetraka ao amin'ny kapila mafy. Ary mamela ny asa mahazatra amin'ny famoronana rakitra voageja mamela azy ireo hizara ho ampahany, miaraka amin'ny fanamorana ny fampidirana maody maodely sasany toa ny, ohatra, ny habe faran'izay avelan'ny Gmail.
Ireo sy ireo fiasa fototra sy manokana hafa dia mahatonga ny B1 Free Archiver ho safidy tsara dinihina., notsapaina, mandra-pahatongany ho vahaolana farany amin'ny sehatry ny fikirakirana rakitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » B1 Free Archiver: mpitantana archive iray tsotra sy tsotra
Cloudflare dia nanolotra fitaovana fikarohana ny HTTPS
Tonga ny kinova vaovao an'ny OpenShot 2.4.4 mpamoaka horonantsary tsy mivantana